I-Internet Explorer: Ishintsha usayizi Wezithombe kusihleli se-HTML esiseWebhu | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 7, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Nasi isibonelo, usebenzisa umhleli we-TinyMCE:
Uma uvula lo mhleli kuFirefox, uzobona ukuthi ukuhudula isithombe kugcina isilinganiso sesici sesithombe:
Kodwa-ke, kwi-Internet Explorer, ayigcini isilinganiso sesici nhlobo. Kungenzeka yini ukucindezela ubukhulu besithombe njengoba sihudulwa ku-Internet Explorer? Ngiyihlanze inethi futhi ngiza ngingenalutho kulokhu! Ngabe kukhona osebenze ngokuzungeza le nkinga ngokubuyisa izakhiwo entweni ye-DOM abuye alinganise kahle isithombe esigcwalisiwe? Noma yimaphi amathiphu noma amaqhinga angathakaselwa!
Sep 12, 2006 ngo-1: 35 PM
Ukulandela nje… omunye wabaxazululi bethu abakhulu, uMarc, uveze ukuthi angasebenzisa umcimbi wokhiye ukucindezela ukuguqula isithombe nokugcina isilinganiso sesici ngemuva komcimbi wokuhudula. Nazi ezinye izinsiza azidlulisile:
Feb 4, 2008 ngo-11: 25 AM
Ngibhekane nenkinga efanayo.
Ngicela ungisize ngiyixazulule?
Ngiyabonga kusengaphambili !